Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Iwe na mgbochi mgbochi na -etolite
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ndị mmadụ na-enwe nkụda mmụọ na mgbochi mmachi njem COVID-19 na ọbụna hụla ka ndụ ha na-ata ahụhụ n'ihi ya.
67% nke ndị zara ajụjụ nyocha chere na a ga-emepe ọtụtụ oke ala ugbu a, ihe ruru pasentị iri na abụọ site na nyocha June 12.
64% nke ndị zara ajụjụ nyocha chere na mmechi ókèala adịghị mkpa na ọ baghị uru ịnwe nje ahụ (ihe ruru pasent 11 site na June 2021).
73% zara na ndụ ha na-ata ahụhụ n'ihi mmachi njem COVID-19 (ihe ruru pasent 6 site na June 2021).
The Airtù Na-ahụ Maka Transportgbọ njem International (IATA) kọrọ na ndị njem ụgbọ elu na-enwe nkụda mmụọ na mgbochi mgbochi COVID-19. Nnyocha nke IATA nyere mmadụ 4,700 zara n'ahịa 11 na Septemba gosipụtara ntụkwasị obi na enwere ike ijikwa ihe egwu dị na COVID-19 yana na ekwesịrị iweghachi nnwere onwe njem.
67% nke ndị zaghachirinụ chere na a ga-emepe ọtụtụ ókèala obodo ugbu a, ihe ruru pasent 12 site na nyocha June 2021.
64% nke ndị zaghachirinụ chere na mmechi ókèala adịghị mkpa na ọ baghị uru ịnwe nje ahụ (ihe ruru pasent 11 site na June 2021).
“Ndị mmadụ na -enwe nkụda mmụọ na Mmachi njem covid-19 na ọbụna karịa nke ahụla ka ndụ ha na -ata ahụhụ n'ihi nke a. Ha ahụghị mkpa mmachi njem iji chịkwaa nje a. Ha efuola ọtụtụ oge ezinụlọ, ohere mmepe onwe onye na ihe ndị kacha mkpa na azụmahịa. Na nkenke, ha na -atụfu nnwere onwe ife efe ma chọọ ka eweghachi ya. Ozi ha na-ezigara gọọmentị bụ: COVID-19 agaghị apụ n'anya, yabụ anyị ga-ewepụta ụzọ maka ijikwa ihe egwu ya mgbe anyị na-ebi ma na-eme njem, "Willie Walsh kwuru. obodo ntàDirector General.
Nkwado na -eto maka nnwale ma ọ bụ ịgba ọgwụ mgbochi iji dochie kwarantaini
Ihe mgbochi kachasị maka njem ikuku na -aga n'ihu bụ usoro ichebe iche. 84% nke ndị zara zara gosiri na ha agaghị eme njem ma ọ bụrụ na enwere ohere ịpụ iche na ebe ha na -aga. Ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu nke ndị na -aza ajụjụ na -akwado iwepụ kwarantaini ma ọ bụrụ:
Otu onye nwalere ihe ọjọọ maka COVID-19 (73% na Septemba ma e jiri ya tụnyere 67% na June)
Enyere mmadụ ọgwụ mgbochi (71% na Septemba ma e jiri ya tụnyere 68% na June).